လူတွေရဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြုမှုလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံများ - Myanmarload
လူတွေရဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြုမှုလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဓာတ်ပုံများ
လွန်ခဲ့သော ၄ လ က 17:07 August 14, 2019
တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတွေကထူးခြားကြပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတွေက ရူးမိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး တွေရှိနေကြပေမဲ့လဲ သူတို့ဘာသာ သူတို့အဆင်ပြေသွားတဲ့ ကိစ္စတွေလဲရှိပါတယ်။ တခါတလေ အလွဲလေးတွေက တည့်သွားတက်ကြတာကို ပရိသတ်ကြီးလဲသိရှိရမှာပါ။ ခုဆိုရင်လဲ ကမ္ဘာအနှံ့က လူတွေရဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပြုမှုလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ပုံတေံကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံကိုကြည့်လေကြည့်လေ သင်ရယ်ချင်လေ ရယ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အဲ့ဒီလူကတော့ ရထားပေါ်မှာ ငိုက်မိ အိပက်ပျော်မိရင် ဦးထုပ်တစ်လုံးရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးမသတ်မှတ်ချင်လဲ ဟာသတစ်ခုလုပ်ပြတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ သို့သော်များလဲ ဘေးက ကလေးအတွက်တော့ နည်းနည်းလေးတောင် ဟာသမဆန်ခဲ့ပါဘူး။
This kinda looks comfortable
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ရုံးခန်းလေးကို သူများနဲ့မတူစေပဲ ထူးထူးခြားခြားလေးရှိနေတက်ကြစမြဲပါ။ တကယ်လိုများ သင်ဟာ Creation ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရုံးခန်းလေးကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေချင်ရင် ပုံပါ ဒီဇိုင်းလေးကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို လူတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပြုမှုလုပ်ကိုင်ကြရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်မလဲ။ ပုံထဲက မိန်းကလေးကိုပဲကြည့်ပြီး သိရှိလိုက်ပါ။
တော်တော် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူပဲ...မသိရင် သူမျက်နှာသူကိုင်ထားသလိုပါပဲ။ ဖုန်းကာဗာကို ပရိသတ်ကြီးရော အဲ့လိုမျိုး မထားခြင်းဘူးလား...အာ့ဆိုရင် သင်ဖုန်းပြောလို့ပြောမှန်းမသိတော့ဘူးလေ။
And they call it Fashion
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘောင်ဘီးဒီဇိုင်းတွေကလဲ ဆန်းကြယ်လာပြီလေ....။
Did she forget to leave the bed behind
သူမကိုကြည့်ရတာ ခေါင်းအုံးတွေကို သံလိုက်ဆွဲသလို ဆွဲနိုင်တယ်နဲ့တူတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးကလဲ တကယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ လူကြားထဲ သွားလာခဲ့ပါတယ်။
Something is definitely going wrong!
အမြွှားတွေဆိုတော့လဲ ဝတ်ပုံက အတူူတူပါပဲ။ ဒီဇိုင်းထွင်တဲ့သူကလဲ ထွင်တက်ပါတယ်။
Where did fashion sense go?
Fashion နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ခုပုံပါ Fashion ကလဲ တစ်ခုအပါအဝင်ပါ...ဘယ်လိုသူကများ အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ အိမ်ပြင်ကိုထွက်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိတာလဲမသိနိုင်တော့ပါဘူး။